राजपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने | Chautarikhabar
प्रकाशित मिति: बुधवार, मंसिर १९, २०७५	समय - ८:०७:२९
काठमाडौं । राजपा नेपालका शीर्ष नेता लक्ष्मणलाल कर्णले अबको चार दिनपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘अब यो सरकारलाई समर्थन जारी राख्नुपर्ने कुनै औचित्य छैन । हाम्रो पार्टीको अब बस्ने बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय लिन्छ ।’
आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले वर्तमान सरकार पूर्ण रुपमा असफल भैसकेको पनि आरोप लगाए । उनले भने,‘सरकारले कुनैपनि गतिलो काम गर्न सकेको छैन् । स्थानीय सरकारमा अहिले विकास रकमको चरम दुरुपयोग भएको छ । बास्तवमा भन्ने हो भने यो सरकारले राम्रो काम केहीपनि गर्न सकेको छैन् ।’ सरकारले मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन समेत कायम गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।
उनले भने,‘चार महिना अघि भएको निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या प्रकरण आजपनि चर्चित नै छ । यो कसको कमजोरी हो ? एउटा बच्च बलात्कृत हुन्छ, त्यसलाई मारिन्छ, र त्यसको दोषी को हो भन्ने पत्तै लाग्दैन् । अनि यो भन्दा निकम्मा सरकार अरु को होला ? यो देशमा यतिका प्रहरी छन् । सशस्त्र प्रहरी छन् । सेना छ । लाखौंको संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरु छन् । अझ नपुगेर भर्ना गरिँदैछ । के को लागि ? केवल मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई स्यालुट ठोक्नको लागि ?’
साँढे ३३ केजी सुन तस्करी प्रकरण अहिले सेलाएको भन्दै सरकारकै कारण यो प्रकरण सेलाएको उनको आरोप छ । उनले थपे,‘अहिले त जेलमा भएकाहरुपनि धमाधम छुट्दैछन् ।’
कर्णले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले क्रिश्चियन धर्म प्रचार गर्नको लागि नै योगदान पुर्याएको आरोप लगाए । उनले भने,‘यदि प्रधानमन्त्री वा अरुले बरु क्रिश्यिचन धर्म नै कबुल गरेको भए मलाई केही पनि भन्नु थिएन । तर, देशको सरकार प्रमुखले नै एउटा धर्मको निमित्त खर्च गर्ने र प्रचार गर्ने यो विल्कुल गलत काम भयो । व्यक्तिगत रुपमा केपी ओली क्रिश्चियन बन्न सक्नुहुन्छ । त्यो उहाँको व्यक्तिगत छुट हो । तर, उहाँ अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्री हो । उहाँ प्रधानमन्त्री भईकन जुन एउटा धर्मको प्रचारमा लाग्नुभयो, यो विल्कुल गलत हो । यो हाम्रो संविधानको बर्खिलाप हो । संविधानले पनि यसलाई सहँदैन् । उहाँले जुन काम गर्नुभएको छ, त्यो विल्कुलै गलत काम हो ।’
सरकार मुलुकलाई धार्मिक र साँस्कृतिक उपनिवेश बनाउन अग्रसर – राप्रपा (प्र) अध्यक्ष, पशुपतिशमशेर
कम्युनिष्ट सरकार देशलाई दीर्घकालीन धार्मिक एवं साँस्कृतिक द्वन्द्वको सुरुङ तर्फ धकेल्न उद्यत्- पशुपति शमशेर जबरा
विहान उठ्ने वित्तिकै अनिवार्य गर्नुस् यी ३ काम, जसले तपाईलाई उर्जा दिन्छ ।
सरकार आफ्नै छायाँदेखि किन डराएको ? – बाबुराम भट्टराई